एनसेलले ल्यायो भ्यालेनटाइन अफर, प्रियजनको नम्बरमा सस्तैमा कुराकानी ! « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
एनसेलले ल्यायो भ्यालेनटाइन अफर, प्रियजनको नम्बरमा सस्तैमा कुराकानी !
२६ माघ २०७३, बुधबार ०६:१२
काठमाडौँ, २५ माघ । एनसेलका ग्राहकहरुले आफूले छानेको एउटा विषेश नम्बरमा अब अझ सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्ने भएका छन् भने रिङ ब्याक टोनमा पनि ५०% छुटको पाउने छन् । यही बुधबार (माघ २६) देखि लागु हुने गरी जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले भ्यालेनटाइन अर्थात प्रणय दिवशको अवसरमा दुई आकर्षक योजनाहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले एउटा एनसेल नम्बरलाई आफ्नो नम्बरसँग पेयर गरी आफ्नो प्रियजनसँग अझ सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्ने बताएको छ । आफ्नो नम्बरसँग आफूले चाहेको अर्को एनसेल नम्बर पेयर गरी मात्र ५० पैसा (कर बाहेक) प्रति मिनेटमा कुरा गर्न सक्नेछन् । यसका साथै यो सेवा सुचारु गर्ने ग्राहकले १०० वटा एसएमएस निःशुल्क पाउनेछन् भने प्राप्त एसएमएस १५ दिनको लागि मान्य हुने र निःशुल्क एसएमएस पेयर गरिएको नम्बरमा मात्र पठाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
ग्राहकहरुले १७१०६ डायल गरी यो सेवा निःशुल्क सुचारु तथा आफूले चाहेको एनसेल नम्बर पेयर गर्न सक्ने एनसेलले बताएको छ । आज जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएकोछ, ‘ग्राहकले एस्ट्रिक्स् १७१०६ एस्ट्रिक्स् पेयर गरिने मोबाइल नम्बर ह्यास डायल गरेर पनि यो सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै एसएमएम मार्फत पनि यो सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन् । यसका लागि ग्राहकले अंग्रेजीमा एड अर्थात एडिडि (ठूलो ए र सानो अक्षरमा डिडि) स्पेस पेयर गरिने मोबाइल नम्बर टाइप गरी १७१०६ मा एसएमएम पठाउन सक्नेछन् ।’
त्यस्तै पिआरबिटी सेवाको छुट अन्तर्गत, एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले १७११७ डायल गरी प्राप्त निर्देशन अनुसार २० वटा रोमान्टिक गीतहरुको सूचीबाट आफ्नो रोजाइको गीतलाई ५०% छुटमा आफ्नो रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नेछन् । आफ्नो साथीभाईलाई कल गर्दा बज्ने रिङ ब्याक टोन यदी मन परेमा ग्राहकले उक्त टोन बजिरहेको बेलामा एस्ट्रिक्स् डायल गरी त्यस टोनलाई कपी गर्न सक्ने पनि जनाइएको छ । यसरी कपी गरिएको टोन यदी अफरको सूचीमा समावेश गरिएका २० वटा गीत मध्ये भयो भने ग्राहकले रिङ ब्याक टोनमा ५०% छुट पाउनेछन् ।
”ग्राहकहरुका लागि सुलभ दरमा आफ्ना प्रियजनसँग कुरा गर्न तथा निःशुल्क एसएमएसको मजा लिन सकिने यी अफरहरु ल्याउन पाउँदा हामी हर्षित छौ” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने ”एउटा नम्बर पेयर गरी सुलभ शुल्कमा कुरा गर्न सकिने र ५० प्रतिशत छुटमा आफूलाई मन परेको गीत रिङ ब्याक टोन राख्न मिल्ने सुविधाले ग्राहकलाई थप मूल्य प्रदान गर्नेमा हामी विश्वस्त छौ ।”यी दुवै अफरहरु १५ दिनको लागि मान्य रहने पनि शर्माले बताए ।
प्रकाशित : २६ माघ २०७३, बुधबार ०६:१२